Toamasina Tokantrano roa niara voatafika
Manomboka miverina indray ny tsy fandriampahalemana raha toa ka somary voafehy izany tato ho ato.
Trafikana rongony Telolahy indray no nampidirina am-ponja tany Ambanja
Lehilahy miisa 03 no voasambotry ny Polisy avy ao amin'ny CSP Ambanja ny talata faha 31 martsa teo noho ny fitondrana rongony milanja 102 kilao.
Toliara Tratra ireo jiolahy mpanafika cash point
Lehilahy roa no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin'ny DRSP Atsimo andrefana ny talata faha 31 martsa teo tao amin'ny fokontany Besasavy
67 ha Voasambotra ilay mpangalatra nikoizana
Tovolahy iray 22 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao 67 Ha ny 01 aprily teo tokony ho tamin'ny 04 ora maraina noho ny fitondrana zava-maranitra.
Ambatoroka Maty voatifitry ilay jiolahy saika hanafika Villa
Manao fanamby hatrany ny poisim-pirenena fa tsy hitsitsy mihitsy manoloana ireo olon-dratsy mbola mahasahy manararaotra ny vahoaka Malagasy amin'izao toe-java-miseho eto amin'ny firenena izao.
Sahamadio 67 ha Lehilahy iray tratra nanendaka vehivavy 3
Lehilahy iray 31taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin'ny CSP 7 67ha ny 26 martsa 2020 lasa teo teny Sahamadio 67ha noho ny resaka fanendahana.
Zandary 41 no efa naiditra am-ponja tao anatin`ny enim-bolana ary tsy nisy nanagadra olona be dia be raha tsy izahay ato amin`ny zandarimariam-pirenena, hoy ihany izy. Tsy misy ny indrafo amin`ireo izay minia handika sy manitsaka ny lalàna mifehy ny zandarimariam-pirenena. Mbola hitohy hatrany io fanadiovana io ary tsy mifidy laharam-boninahitra fa izay mihoa-pefy dia tsy maintsy hampiharina aminy ny lalàna. Notsipihany fa tsy natao hangalana dera ny maha zandary fa natao andraikitra fotsiny. Izany no fanambarana nataon`ity sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ity nandritra ny lanonana fampiakarana galona ireo manambonihaitra miisa 17 teny amin`ny toby Ratsimandrava ny sabotsy lasa teo. Niankina tamin`ny fitondran-tena sy ny asa vitan`izy ireo no masontsivana nofantenana ireo zandary ireo.